Sheekh Shariif oo sheegay in dalka xiligan doorasho ah lagu qaban karin (Sawiro) – SBC
Sheekh Shariif oo sheegay in dalka xiligan doorasho ah lagu qaban karin (Sawiro)
Posted by editor on June 3, 2011 Comments
Madaxwayanaha FDKMG ah ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa khudbad uu ka jeediyey shirka ay soo abaabushay kooxda xiriirka caalamiga ah ee Soomaaliya ee ka soconaya magaalada Kampala ee caasimada wadanka Ugandha wuxuu kaga hadley arimaha waqtiga kala guurka ah ee dawlada KMG ah.
Sheekh Shariif oo khudbad ka jeedinaya shirka
Sheekh Shariif ayaa ku xusey khudbadiisa in dalka aan laga qaban karin wax doorasho ah xiligan, isagoo tilmaamay in hadii la qabto doorashooyin ay suurtagal tahay in dalka uu gacanta u galo kooxda Al-Shabaab.
“Waxaan aaminsanahay inaan wax doorasho ah xiligan lagu qaban karin dalka gudihiisa, hadii ay dhacdo arintaasi waxay noqonaysaa in kooxda Al-Shabaab ay dib isku soo abaabusho, kuwaasi oo ku jabey xiligan hawlgalka ciidamada xooga dalka & kuwa Midowga Afrika ee AMSIOM ka wadaan magaalada Muqdisho” ayuu ku yiri khudbadiisa Sheekh Shariif Sheekh Axmed.
Sheekh Shariif wuxuu muujiyey rajo wnaaagsan oo laga qabo wadahadalada khilaafka u dhaxeeya hay’adaha dastuuriga ee dawlada, isagoo sheegay in loo baahan yahay in laga gudbo marxalada kala guurka ee dalka uu marayo xiligan.
“Beesha caalamka waxaa looga baahan yahay inaanay afduubin go’aanka shacabka Soomaaliyeed, ayna ixtiraamaan rabitaanka ummada Soomaaiyeed oo garanaysa halka u wanaagsan” ayuu ku xusey hadalkiisa Madaxweynaha DFKMG ah.
Hadalka Sheekh Shariif ee ah inaan dalka wax doorasho ah xiligan lagu qaban karin ayaa ku soo aadayaa iyadoo madaxweynaha wadanka Ugandha Yuweri Musaveni uu sheegay in loo baahan yahay in mudo hal sano ah lagu kordhiyo waqtiga dawlada KMG ah, isagoo waliba ku hanjabay in hadii arintaasi aan la qaadan uu ciidamadiisa kala soo baxayo Soomaaliya.
Shirkan waxaa sidoo kale lagu casuumay Madaxweynaha Puntland C/raxmaan Faroole oo khudbad ka jeediyey kulankaasi, sidoo kale waxaa ka qayb galaya gudoomiyaha Baarlamanka KMG ah Shariif Xasan Sheekh Aadan.